Waa kuma Sh Cabdiwali oo maanta Gaalkacyo lagu dilay? - BBC News Somali
Image caption Sheekh Cabdiweli
Waxaa magaciisa oo saddaxan uu yahay Sh. Cabdiwali Sh. Cali Cilmi Yare.
Sida uu BBC u sheegay nin aqoon dheer u lahaa Sh Cabdiwali ayaa da'diisa lagu qiyaasay dhowr iyo lixdan sano.
Ninka BBC la hadlay ee aqoonta u lahaa sh CabdiWali oo sababo ammaan darteed aan magaciisa shaacin karin ayaa noo sheegay in sh Cabdiwali oo uu isaga qudhiisa wax ka soo bartay uu ahaa nin fahmo badan.
"Sh Cabdi Wali markii uu soo hanaqaaday waxa uu noqday nin kaxeeya gawaarida xamuulka qaada islamarkana shaqada darawalnimada waxaa uu ka shaqaysanayay muddo" ayuu yiri.
Muddadii uu xerta ahaa "waxa uu khilaaf dhexmaray isaga iyo raggii khaadumiinta u ahaan jiray aabihii Sh Cali Cilmi Yare, sababtana waxa ay ahayd hab dhaqankiisa oo ay sheekha uga warami jireen".
"Horraantii sanaddii 2000 ayuu Sh Cabdiwali waxaa uu magaalada Muqdisho ka furtay xarun dadka uu Quraanka ku saari jiray halkaasi oo uu dadka wax uga tumi jiray quraana ku saari jiray" ayuu sii raaciyey.
Sanad ka dib waxaa uu magaalada Gaalkacyo ka furay xarunta maanta la weeraray oo uu u bixiyay "Xarunta Nabiga".
Xaruntan ayaa waxaa uu isugu keenay dhallinyaro, halkaasi oo uu ka soo saari jiray Heeso iyo Nabi ammaanno muran dhaliyey.
Ninka BBC u waramay ee aqoonta u lahaa Sh Cabdiwali ayaa sheegay in uu Sheekha waydiiyay "waxa ay yihiin waxaan uu isku dhex wado ee Muusiga, dhaanta, iyo diinta".
"Maadaama uu Sh Cabdiwali diinta yaqiinay waxaa uu iigu jawaabay in wax kasta uu mas'alo diini ah u hayo, islamarkaana ciddii doonaysa in laga jaahilbixiyo ay soo fariisato". Ayuu yiri
Fatwo laga soo saaray ninka lagu eedeeyay in uu nabiga aflagaadeeyay
Ma laga yaabaa in la siidaayo Qalbi-Dhagax?
Keating: Dowladda dhexe iyo Maamul goboleedyada sidan unbeey iisu haysteen
Waxaa uu Sh Cabdiwali ku adkeystay in wax walba oo saliga Nabiga lagu qurxinayo ay banaan yihiin.
Maxaa ka jiray eedeeynta ah in uu Nabnimo sheegtay?
Sh Cabdiwali Sh Cali Cilmi Yare ayaa dadka dhaliila waxay ku eedeeyeen in uu shaaciyay masawir uu ku sheegay in uu yahay Nabi Maxamed Nabadgalyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee.
"Anigu cilmigaa ma gaarin wax lug ahna kuma lihi" ayuu yiri.
"Adiga ayaan kaa maqlayaa nabi Maxamed ayaa la soo sawiray, laakiin sheekeyga ayaa Maxamed la yiraahdaa waana xabiibkeyga, nabi Maxamedna kuma sheegin haddana ku sheegi maayo" ayuu yiri.
Al Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda dilkaas, waxayna sheegeen inay hore ugu digeen.